Ramba Wakatarisa Pamhepo Yako Pamakwikwi neRivalfox | Martech Zone
Ramba Wakatarisa Pamhepo Yako Pamakwikwi neRivalfox
Mugovera, March 14, 2015 NeChishanu, Kurume 13, 2015 Douglas Karr
Rivalfox inounganidza data kubva kwakasiyana masosi pane vako vakwikwidzi uye inoita kuti data riwanikwe nyore kubva kune mumwe mukwikwidzi wedhata hub. Zvinyorwa zvinosanganisira traffic, kutsvaga, webhusaiti, tsamba yemapepa, mhizha, zvemagariro uye kunyangwe vanhu uye shanduko yebasa.
Rivalfox ndeye SaaS mhinduro inoisa yekucheka-pamucheto kukwikwidzana njere mumaoko ako. Tinotenda kuti nekudzidza kubva kumakwikwi ako, unogona kukura nekukurumidza, kudzivirira zvikanganiso uye kuwana mukana. NaRivalfox, makambani eese saizi anogona kushandisa simba rekukwikwidzana njere uye nekugadzira yakasimba data-inotungamirwa nzira.
Rivalfox Kukwikwidzana Nenjere Platform Inosanganisira
Webhusaiti Shanduko Kuongorora - Wongorora mawebhusaiti evakwikwidzi uye gamuchira kunyevera nekukurumidza kana shanduko ikaitika. Rivalfox inosimbisa zvinyorwa, kusvika kudiki diki, kukuzivisa iwe nezve idiki diki nzira yekuchinja. Navo Webhusaiti Cropper, iwe unogona kunyange kusefa kunze kweruzha uye chete tarisa pane iwo mapeji enzvimbo akakosha kwauri.
Pamhepo Press Kuongorora - Unganidza nhau, zvinyorwa uye zvinotaurwa kubva kune ese makuru masosi enhau uye otomatiki uzviratidze mudashboard rako uye nemishumo yezuva nezuva. Tevera zvirevo zvinowaniswa neako mukwikwidzi, ne frequency uye midhiya kuburitsa, uye uzvimise pamatanho ako. Iwe unogona kugadzirisa anosvika mashanu akasiyana mazwi akakosha
pamukwikwidzi wekuvhara zvakanyanya uye nemazvo.
Traffic uye Kutsvaga Kuongorora - Tarisa traffic yako uye uienzanise neiyo yevanokwikwidza, uchijekesa maKPIs akakosha: kushanya kwakasarudzika, kutarisisa peji pamushandisi, renji yepasi rese uye zvimwe. Wana nzwisiso yakazara yetraffic yavo yekufungidzira nhamba dzekutengesa uye kuyera kukanganisa kweshanduro dzekushambadzira. Enzanisa nhamba dzavo kuti dzipikisane neyako kuti unyatsogadzirisa nzira yako yekutengesa. Inosanganisirwa chinzvimbo chepasirese, traffic traffic mamaki, kutarisisa peji pamushandisi, zvinopinda zvinongedzo, Google kuita chiyero, chiyero chekukosha kwewebhusaiti, vanofungidzirwa vashanyi, nguva pane saiti, bounce rate, traffic traffic, yekutsvaga traffic, organic uye yakabhadharwa mazwi akakosha.
Social media kuongorora - Wongorora epamusoro mashanu masocial network anotumira vashanyi kune ino yewikwidzi webhusaiti. Cherekedza kubatanidzwa nekutevera pane zvese zvavo zvemukati zvakagovaniswa
Blog uye Zvemukati Kushambadzira Kuongorora - Ziva zvemukati zvevanokwikwidza zvinobudirira uye tsvaga kwavanowana iwo masocial share. Shandisa yavo dhata kunatsiridza yako wega yemukati zano uye kuhwina vakavimbika vateereri.
Email uye Newsletter Kushambadzira - Kugona kuteedzera matsamba ekuona kuti vako vari kukwikwidza vari kuyedza kugovana nei vanhu, uye kuti vanoigovana kangani.
Tags: vakwikwidzi vakangwariraBlog Kuongororamakwikwi machenjedzokukwikwidza email yekutarisakukwikwidza kutsvagisaAnokwikwidza Benchmarkingemail yekutarisaemail kushumatarisa vakwikwidziNhau uye Keyword KuongororarivalfoxRivaliqsaasSEO Ruzivo Kuongororamagariro enhausoftware sebasazvideoTraffic Ruzivo KuongororaPeji rewebhu Shandura Kuongorora
Maitiro Ekumhanyisa iyo A / B Bvunzo ne ChangeAgain
Zvemagariro Media Ita nezvisingaitwe